ဆင်တစ်ကောင် အိမ်မက်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆင်တစ်ကောင် အိမ်မက်….
Posted by NK on Mar 14, 2012 in Copy/Paste |9comments
၀မ်းသာသည့်စိတ်နှင့်အတူ ဒီလောက် ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကို အစိုးရက ဘာလို့ လက်တုန့်ဆိုင်းနေရတာလဲ ၊ သူတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်မရှိလို့ မလုပ်တာနေမှာပေါ့ ၊ သူ့ဟာသူလုပ်မှာကို ဘာလို့ လက်နှေးနေရတာလဲ ၊ အစရှိသဖြင့် အပြစ်တင်ကြလေသည် ။ ထိုအတောအတွင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးက အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဦးဇော်မင်းဦးက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဆက်အသွယ် မလုပ်ပဲ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ထုတ်ပေးထားသော တယ်လီဖုန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရန် နည်းပညာအရ မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ၊
ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်ဆက်သွယ်ရန် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် မဖြစ်မနေဆက်သွယ် ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ မိုဘိုင်းနက်ဝပ်တည်ဆောက်ရန်မှာ နေ့ချင်းညချင်း မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သဖြင့် ဦးဇော်မင်းဦးကို ၀ိုင်းဝန်းအပြစ်တင်ကြသူများ အများအပြားလည်းပေါ်ပေါက်လာလေ၏ ။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင်ရော ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင်ပါ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံလိုသူအများအပြား လာရောက်ဆွေးနွေးဘူးပါသည် ။ကမ္ဘာနှင့် ဒေသတွင်းမှ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း ကုမ္ပဏီကြီးများအပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည် ။ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများမှတစ်ဆင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာကို ချဉ်းကပ်ဆက်သွယ်မှုများလည်းရှိပါသည် ။သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများက ၁၀၀% ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံမည် ၊ အကျိုးအမြတ်ကို နိုင်ငံတစ်ကာစံနှုန်းများ အတိုင်း နိုင်ငံတော်နှင့် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု ပြုလုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတို့ ခွဲဝေယူကြမည် ။
ဒီအထိအဆင်ပြေပါသည် ။အဆင်မပြေသည့်အဆင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများက ၄င်းတို့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံထားသည့်ငွေများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ပြန်လိုချင်သည့်ကိစ္စဖြစ်လေသည် ။
ဥပမာဆိုကြပါစို့ ယခုရင်းနှီးမြှုတ်နှံမည်ဟု နာမည်ကြီးနေသော ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီသည် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း စီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံကာ တယ်လီဖုန်း အလုံး ၂ သန်းကို မြန်မာပြည်သူတွေကို မရောင်းပဲအလကားပေးလိုက်သည် ဆိုကြပါစို့ ထိုဖုန်းအလုံး ၂ သန်းကိုရသွားကြကုန်သော မြန်မာတို့သည် တစ်သက်လုံး ချုပ်တီးထားသမျှ အတိုးနှင့်ပြောကြပေတော့မည် ။တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ ဖုန်းတစ်လုံးသည် ၀.၅ ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသည့် မြန်မာငွေတန်ဘိုးပဲ ပြောသည်ဆိုကြပါစို့ ၊ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် တစ်နေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ
၁သန်း နှင့်ညီမျှသည့်ကျပ်ငွေများဝင်ငွေရှိလေသည် ။တစ်လ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀နှင့် ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေများဝင်ငွေရှိလေသည် ။ တစ်နှစ်ဆိုလျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၆၀ နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေများ ၀င်လာလေတော့သည် ။
၃ နှစ်ဆိုလျှင် သူတို့အရင်းကျေလေပြီ….။ ထိုမြန်မာကျပ်ငွေနှင့်ဝင်လာသော ဖုန်းပြောခများကို သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများက အစိုးရထံသွင်းပြီး အစိုးရထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပြန်လိုချင်ကြလေသည် ။ဒီမှာတင် အစိုးရက စဉ်းစားရလေပြီ ။မစဉ်းစား၍မရတော့ ၊ ပြည်သူတွေများများပြောလေ အစိုးရက ဒေါ်လာများများ ရှာရလေဖြစ်လာတော့မည် ။ ဒီနေရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်ကြလေသည် ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း စီမံကိန်းလုပ်မည်ဆိုသော ကုမ္ပဏီသည် အစိုးရထံမှ ဒေါ်လာကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပြန်မတောင်းလျှင်အဆင်ပြေပါမည် ၊ ပြန်တောင်းလျှင် အဆင်မပြေနိုင်ပါ ၊ အဖြေကဒါပဲဖြစ်မည်ဟုယူဆပါသည် ။ ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် ဤမေးခွန်းကို ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ၏ MD ဦးလွင်နိုင်ဦးကို မေးစေလိုပါသည် ၊ သူတို့ရင်းနှီးမြှုတ်နှံ ထားမှုအတွက် အစိုးရထံမှ တနည်းနည်းဖြင့် ဒေါ်လာပြန်ယူလို မယူလို သာမေးစေလိုပါသည်၊ သူ၏ အဖြေသည်
ပြည်သူများစိတ်ဝင်စားနေသည့် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ၏ အဖြေဖြစ်မည် ထင်ပါသည် ။ဒေါ်လာ ပြန်ယူမည်ဆိုလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ ၊ဒေါ်လာ ပြန်မယူဘူး ဆိုလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါမည် ။
ဒေါ်လာ ပြန်ယူယူ ပြန်မယူယူ မဖြစ်နိုင်ပါ
ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ မသိပါ။မလေးမှာ sim card တခုမှ ၁၀ မှ၁၅ rmသာရှိသည် ။1rm=250-260ကျပ် တွက်ကြည့်ပါ။လို သလောက်ဝယ်လို့ရတယ်။ဒေါ်လာပေးစရာမလိုပါ။သူတို့နိုင်ငံ ငွေကြေးဘဲသုံးတယ်။အဲ့ဒါကို ကြည့်ရင် မြန်မာတွေရဲ့ငွေကို အယုံအကြည်မရှိတဲ့သဘောဘဲ။မြန်မာ့ငွေ=စက္ကူ
ရွာထဲမှာ တယောက်ယောက် ကော့မန့် အနေနဲ့ ရေးတာ …… မြင်ဖူးသလိုပဲ … ။
လင့်မှာ ရေးထားတာကို ပြန်ကူးပြီးတင်တာလို့
လင့်က စာတွေကို ပြန်ကူးပြီး
commentဲs က အခုမှေ၇းတာ .ဒီရွာထဲ ဝင် ဝင်လည်နေတာ တော့ကြာပြီး။ဧည့်သည်ဆိုတော့ comments ဘဲရေးတာ။စာတော့မရးတတ်ဘူး။ရေးချင်တာတော့ အများကြီးဘဲ
ိဖျာပုံသူရေ . etone က ပိုစ်ကိုပြောတာပါ ။ အရင် ဒီမှာ တင်ဘူးပါသည်။ ၄င်းအားမှီငြမ်းထား၍ပြောတာပါ ။ ဖျာပုံသူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါနဲ့
ဖျာပုံသူ ရေ ခေါ်တာ ဟုတ်လားမသိ .. ရေးချင်တာရေး ။ ကိုယ်ေ၇းတာမဟုတ်ရင်တော့ မှုရင်းပိုင်ရှင်ကို credit လုပ်ပေးပါ ။ မှီငြမ်းတယ် ဆိုရင်လည်း မှီငြမ်းကြောင်းရေးပေးပါ ။
NK ကိုလည်း ရည်ညွှန်းပါသည် ။
သူကြီးခင်ဗျာမှုရင်းပိုင်ရှင် ကို မကြာခဏ တောင်းပန်နေရ၍ဖြစ်ပါသည်။